App-ka Babylex oo kaa saacidaya horumarka cunugaaga ee tirada ereyada uu yaqaano… – Hagaag.com
Posted on 6 Febraayo 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Saynisyahano ka tirsan Jaamacadaha Jarmalka ee Göttingen iyo Oslo ayaa soo saaray App falanqeeya horumarka ereyada ilmaha.
Barnaamijka ‘Babylex’ – oo bilaash looga heli karo Google “Android” iyo Apple “iOS”, wuxuu qadariya Tirada ereyada cunugga yaqaan, wuxuuna isu barbar dhigayaa ereyada cunugga iyo saaxiibadiisa isku da’da ah iyo jinsiga ay yaqaaniin.
Macluumaadka waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo labo daqiiqo oo tijaabo ah oo waalidku ku muujinayo ereyada cunuggu horey u fahmay una isticmaali karo koox ka kooban 25 eray oo si aan kala sooc lahayn loo doortay. Natiijooyinka waxaa lagu keydin karaa taleefanka gacanta si loola socdo horumarka.
Babylex waxay la shaqeysaa keydka ereyga khaaska ah ee Jaamacadda Stanford, oo ay kujiraan xoggo ereybixin aan la garanaynin oo kumanaan carruur ah. Waxaa jira afar boqol ilaa lix boqol oo erey, waaliddiintuna waa inay muujiyaan ereyada ilmuhu horay u yaqaanay.
Ilmaha loo isticmaalayo dhinaca luqada Ingriiska waa kuwa jira 16-30 bilood, halka luqada Jarmalka 18-30 bilood, halka Noorwejiga 18-36 bilood.
Iyada oo lagu saleynayo jawaabaha oo la gelinayo App-ka kadibna jawaabaha laga soo qaaday keydka macluumaadka App-ka “Babylex” oo xisaabinaya tirada ereyada ilmuhu yaqaano.
Kahor intaadan bilaabin adeegsiga App-ka, isticmaalaha waxaa laga codsanayaa inuu “diiwaan geliyo cunuga cusub”, in uu u doorto magac calaamad u ah cunugga iyo luuqadda uu ku hadlo. Xilligan, codsigu wuxuu taageeraa saddex luqadood oo kala ah Noorwiij, Ingiriisi iyo Jarmal. Kadib xulashada jinsiga ilmaha iyo taariikhda dhalashada, imtixaanka ayaa bilaaban kara.